China KUSHANDISA MAEDHALI fekitari uye vagadziri | Kingtai
Nezviitiko zvakawanda zveKuzivisa uye kudiwa kweMubairo une chekuita nevemari vanobatana neakawanda eiyi misoro, isu taunza mutsara weyekuzivisa mikombe yerabhoni nemenduru. Izvi zvinogona kushandiswa pane chero edu eUniversal Kits uye isu tinotengesa iwo manhamba ega. Isu tinopawo edu ekutora chikamu seti kits yakagadzirirwa neiyo nyowani trophy manhamba.
Chero chikonzero kana chirwere chiitiko chako chingave chiri, funga zvedu mibairo yekuziva uye menduru. Iyi menduru-dzakatarwa menduru dzakanaka pakuziva gomarara kana kuziva zvimwe zvirwere kana zvikonzero. Tsika yekenza yekuzivisa mibairo inogona kudhindwa mumarudzi mazhinji ayo anoratidza rako rakakodzera ribhoni ruvara uye chikonzero. Yakakura kumijaho uye zvimwe zviitiko zvemitambo, gadzirisa yako mamenduru ekuziva nerunyorwa rwako. Tifonere kana mavara ako asina kutaurwa senzira uye tichaita kuti zvishande. Dzvanya pamenduru yemumhanyi yekuzivisa pazasi kuti utarise huwandu hwezvinodzikiswa.
Schoppy's Awareness Ribbon Awards inoratidzira ribhoni musarudzo yako yemavara. MaRibbon ekuzivisa anowanzo kuverengerwa nekusimudza kuziva kwezvikonzero zvakasiyana. Iyi mibairo yakanaka yekutenda mupi kana murongi wesangano rako rerudo kana kupa kune vanokunda zviitiko.
Pashure: Kubudirira Medals
Zvadaro: BHASI DZEMAHARA